Ny Apple Watch dia nanohy nanjakazaka tamin'ny tsenan'ny smartwatch tamin'ny telovolana voalohany 2021 | Avy amin'ny mac aho
Saika hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2015 dia mbola tsy nahita lalao nifanandrinana taminy mihitsy ny Apple Watch. Na dia nanao izay tsara indrindra vitany aza i Samsung dia iray amin'ireo mpamily ny fahombiazan'ny Apple Watch eo amin'ny lafiny varotra ary noho izany ny fizarana tsena.
Araka ny filazan'ny zazalahy an'ny Counterpoint Research, Ny anjaran'ny tsenan'ny Apple nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2021 dia 33.5%, izay maneho fiakarana isa 3 amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Amin'ny laharana faharoa dia Huawei, izay nampihena ny anjarany tamin'ny tsenan'ny 10.1% tamin'ny telovolana voalohany ka hatramin'ny 2020% tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 8.4.
Samsung dia eo amin'ny laharana fahatelo miaraka amin'ny anjaran'ny tsena 8%, izay antsasaky ny teboka iray ambany noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Na izany aza, nitombo 27% ny fandefasana Samsung noho ny lazan'ny Galaxy Watch 3 sy ny Galaxy Watch Active. Na izany aza, latsaka ny anjarany eo an-tsena satria nitombo 35% isan-taona ny fitomboan'ny tsenan'ny smartphone.
Araka ny Counterpoint Research, nahita ny fahombiazan'ny Apple Watch SE teo an-tsena, dia azo inoana fa hanangana smartwatch mitovy amin'izany i Samsung amin'ny vidiny mihena mba hitohizan'ny fitomboan'ny varotra ary hahazo ny anjaran'ny tsena lehibe kokoa.
Ity haino aman-jery ity dia manamafy fa aorian'ny fanambarana ny fifanarahana teo amin'ny Samsung sy Google hampivondrona ny tsara indrindra amin'ireo sehatra telo: Tizen OS, Wear OS ary Fitbit OS, dia azo inoana fa amin'ny taona ho avy, ireo mpamokatra ireo dia afaka misarika isan'ny mpampiasa izay matoky ny Apple Watch fotsiny hatramin'izao noho ny tombotsoany sy ny isan'ny fiasa avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny Apple Watch dia nanohy nanjakazaka tamin'ny tsenan'ny smartwatch tamin'ny Q2021 XNUMX